China Isilumkiso seFektri esenziwe nge-HT60 mveliso kunye nabenzi | Jiahua
Indlela: Isiqulatho sentliziyo
Isayizi yeCtn: 615x315x615mm
sineentlobo zeepani zekomityi yekomityi, imimandla eyahlukeneyo inendlela eyahlukeneyo yokusetyenziswa, ukuze sikwazi ngokweemfuno zabathengi, sivule ukungunda.
I-Allwin Pack isebenzisa izinto ezingavunyelwanga zonke ezihambelana nemigangatho yendalo esingqongileyo, onke amanqanaba okutya.Sakhe ubambiswano lwexesha elide kunye nabathengi abavela eMntla Melika, eYurophu, eJapan, e-Australia, e-Asia kunye neenqwelomoya, ivenkile enkulu, ukutya kunye nokutya abavelisi.
Imifanekiso yeMveliso Into No. I-HT70
Ukupakisha 20000pcs / Carton
Ubukhulu baseKapa 615x315x615mm
Isikhongozeli esincinci esincinci esincinci esincinci esineempawu ezikhethekileyo zentliziyo eziyilelwe, zilungele iintsuku ezikhethekileyo kunye namaqela
Ukuqhuba kakuhle kobushushu. Ubunzima bokukhanya kodwa bomelele, bomelele ngokwaneleyo kwiimfuno zokubhaka
Uyilo olulahlayo, lahla nje la mapani kwaye akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokukhuhla kunye nokucoca
Ilungele izinto ezincinci ezibhakiweyo ezinje ngepudding, ijeli, ikhekhe kunye nazo zonke iintlobo zenkonzo nganye
Kutheni ngefoyile ye-Aluminium?
1. Ugcino lwenethiwekhi.
Ifoyile yeAluminiyam kwizicelo zokupakishwa kokutya kunye nokusela igcina izixhobo ezingaphezulu kunokuba zifuneka kwimveliso yayo. Uvavanyo loHlobo loMjikelo woBomi (i-LCAs) lubonisa ukuba ukufakelwa kwealufoil kunye neefoyile zasekhaya kunegalelo elingaphantsi kwe-10% yefuthe lokusingqongileyo kumjikelo wobomi wemveliso-imveliso ezinzileyo kunye nokusetyenziswa.
2. Ukhuseleko lomqobo
Isithintelo esipheleleyo sefoyile yealuminium ekukhanyeni, kwiigesi kunye nokufuma sisizathu esiphambili sokusetyenziswa kwayo kwizilayiti eziguqukayo zokutya, ukusela kunye nokusetyenziswa kobugcisa. Nokuba sele ebhityile kunika ukhuselo olugqibeleleyo nolondolozo lwevumba kunye neempawu zemveliso. Inokunceda ekwandiseni ubomi obusebenzayo beemveliso ezibuthathaka kangangeenyanga ezininzi, nokuba yiminyaka, zigcina ngokupheleleyo ii-aroma zangaphambili. Ngokwenza ukuba iimveliso zigcinwe ixesha elide ngaphandle kwesidingo sefriji, i-aluminium foil yokupakisha inceda ukuthintela ukonakala kwaye inokubonelela ngokonga amandla amakhulu.
Ukukhuthaza ukupakishwa kwe-aluminium njengemishini, ukwenzela ukunciphisa ungcoliseko lokusingqongileyo, ukwakha uphuhliso oluzinzileyo, ikharbhoni ephantsi kunye nokukhuselwa kwendalo kwindawo yokusinda njengemishini.
1.An alternative kwimveliso zeplastiki kunciphisa ungcoliseko olumhlophe;
Ukunciphisa isabelo sokupakishwa okusekwe ephepheni kwimpahla yabathengi elahlwayo kunceda ukunciphisa ukugawulwa kwemithi kunye nongcoliseko lwemithombo yamanzi kwishishini lephepha;
3.Ukudibanisa i-aluminium foil ukuphakheja ngokutsha imithombo yoluntu, ukufezekiswa kokujikeleza okungapheliyo kwezixhobo zealuminium kunye nendlela eya kuphuhliso oluzinzileyo lwelizwe. Olu luxanduva lweqela lethu, nako ukuzibophelela.
Egqithileyo Isitya seFoyile yeNtliziyo i-HT02
Okulandelayo: Isitya seFoyile yeNtliziyo i-HT100
Isitya seFoyile yeNtliziyo i-HT100
Isitya seFoyile yeNtliziyo i-HT520